MAHAJANGA : Zazalahy 13 taona voatsatoka antsy tamin’ny famonjena zazavavy roa naolan’ny jiolahy
Avy nanatitra mpianatra ity tovolahy, tamin’ny telo ora tolakandro teo, ny alarobia teo, no sendra tovovavy kambana roavavy nanaovan’ny tovolahy miisa enina herisetra hoendahina sy haolana. 16 novembre 2018
Efa an-dalana hody izy no naheno ny antso vonjin’ izy mirahavavy ireo. Tsy nisalasala ity tovolahikely vao 13taona monja niverin-dalana hamonjy azy roavavy. Ny iray tamin’ireo enindahy efa nitolona ilay zazavavy. Be noho ny vitsy anefa ary nanaovan’ireo jiolahy enina tambabe, ka lavo tamin’ny tany.
Mbola tsy namelan’izy ireo mihitsy ary notsindrominy antsy avy eo, ka voa teo amin’ny kibony. Tafaporitsaka izy mirahavavy. Ilay tovolahy kosa mbola afaka nandeha namonjy ny sefo fokontany. Ity farany no nitondra azy teny amin’ny toby fitsaboan’ny masera. Efa nametraka fitoriana ny fianakaviana.
Ity tovolahikely maherifo ity kosa dia mendriky ny homen’ny tanànan’i Mahajanga valisoa satria mbola tanora tokoa dia efa manana fo antra sy mitsangana amin’ny maha olompirenena vanona manohitra ny ratsy. Ohatra eo amin’ny fiarahamonina izy ka mendriky ny ampaherezina hatrany.
2018-11-21 12:37:54 par ANDRIANANJANIRINA Rija
Midera ny herimpon’ity tovolahy kely ity.Marina ny voalazan’ny lahatsoratra : tokony homena mari-pankasitrahana izy